Mourinho oo ka hadlay xaalada kooxdiisa Manchester United, kahor kulanka caawa ee Valencia – Gool FM
Mourinho oo ka hadlay xaalada kooxdiisa Manchester United, kahor kulanka caawa ee Valencia
Dajiye December 12, 2018
(Champ’ League) 12 Dis 2018. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa la hadlay saxaafada ka hor kulanka ay caawa kooxda Manchester United kula ciyaari doonto koooxda Valencia tartanka Champions League.
Manchester United ayaa xaqiijisay inay u gudubtay wareega xiga 16-ka ee tartanka Champions League, halka kooxda Valencia ay ka ciyaari doonto UEFA Europa League bisha Febraayo ee soo aadan, lakiin taasi kama horjoogsaneyso in caawa ay iska horimaanayaan labada kooxood waa weyn ee qaarada Yurub.
Jose Mourinho oo shir jaraa’id kasoo muuqday kahor kulanka Jose Mourinho ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan heysanaa ciyaaryahano u qalma inay ciyaaraan iyo kuwo u baahan in ciyaarsiiyo, waxaan kasoo tagay ciyaartoyda qaar ee kooxda Manchester United, si xidigaha qaar ay u helaan fursad ay ku ciyaari karaan”.
“Waxaan u gudubnay wareega xiga ee 16-ka, uma maleenayo in Juventus ay guuldareysan doonto kooxda Young Boys, xaalada group-keena waxba iskama badali doonaan sida uu horey u ahaa”.
“Pogba wuu ciyaari doonaa kulanka caawa, waxaan rajeynayaa in qaab ciyaareedkiisa uu saameyn ku yeesho kooxda, sidoo kale waxaan rajeenayaa in qof walba ee kulankan ka qeyb gala inuu saameyn ku yeesho kooxda”.
“Mararka qaar waxaad leedahay aragti ah in taageerayaasha ay xiiseynayaan kooxda in ka badan tababarayaasha, laakiin taasi ma ahan mid run ah, ma jirto cid ku sugan Manchester United ee aniga iga jecel kooxda”.
HORDHAC: Manchester City v Hoffenheim
HORDHAC: Young Boys v Juventus